ब्राह्लेस सेलिब्रिटी, जसले स्तनलाई स्वतन्त्रता दिँदा विश्वलाई ततायो ! [फोटोफिचर] - Movies Trends
ब्राह्लेस सेलिब्रिटी, जसले स्तनलाई स्वतन्त्रता दिँदा विश्वलाई ततायो ! [फोटोफिचर]
१, माइली साइरस
महिला गायक तथा अभिनेत्री माइली साइरस वीएमए को दौरानमा जंगली पक्षसँग अधिक मात्रा देखिन्छिन् । तर एकदिन जब उनै सुन्दरी बिना ब्रा हिँडिरहेको भेटिइन् । उनको पुरै शरीर देखिएको थियो । स्तनका मुण्टा सर्लक्कै देखिन्थ्यो । स्तनको मुण्टामा लगाएको धातुपनि स्पष्ट देखिन्थ्यो ।
२ सेलेना गोमेज
सेलेनाले एकदिन आफुलाई खुबै फिट हुँने पहिरन लगाएकी थिइन् । त्यसमा उनका लाजका गहना स्पष्ट देखिएका थिए । त्यो दिन उनी लाजले पानी पानी भएकी थिइन् ।
३, केंडल जेनर
जेन्नर संभवत उनी आफ्नो निप्पललाई स्वतन्त्र राख्न चाहान्छिन् । केही पटक पापराज़ीद्वारा त्यस्तै वस्त्रमा फोटो समेत खिचाएकी छिन् ।
४ बेला हादीद
उनी एकदिन आफ्नो जन्मदिनको पार्टीमा विना ब्रा देखिइन् ।
५ जेनिफर एनिस्टन
जेनिफर एनिस्टन अत्यन्तै सुन्दर शारिरिक वनावट भएकी सुन्दरी हुन् । उनी सामान्य वस्त्रमापनि निक्कै आकर्षक देखिन्थीन् । तर एकदिन उनी सेतो टिसर्टमा आफ्ना निप्पल देखाउदै बाहिरिइन् । त्यसले उनलाई चर्चामा राखेको छ ।
६ काइली जेनर
उनले आफ्नो इंस्टाग्राममा यस्तो फोटो पोष्ट गरिन् । त्यसले एकपटक संसार ततायो । उनको पोस्टमा निप्पल बाहिर आउने बस्त्र लगाइन् । निप्पलमा भएको औँठी देखिएको थियो ।
७ क्रिसी टेइगेन
उनी एकदिन न्यूयॉर्क शहरमा भोजन गर्न गइरहेकी थिइन् । उनको पोसाकले खुबै तताएको थियो ।
८ बेला थोरने
उनी सामुन्द्रीक बीचमा रमाईरहेकी थिइन् । उनको कपडाबाट निप्पल बाहिर आइरहेको थियो ।
९ खोल कार्दशियन
एक लाईभ शो मा नै उनको निप्पल समाएको घटना भएको थियो ।
१० किम कार्दशियन
किम कार्दशियन सन्सारकै सेक्सी सुन्दरी हुन् । उनको पहिरन मात्र हैन हर्कतले नि निक्कै चर्चा ल्याउने गर्दछ ।
११ केट मोस
केट नग्न देखिएकी थिइन् ।
नेपाली सेना द्वारा १५० अफिसर क्याडेट (सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट ) को माग ( +2/Inter पासले आवेदन दिन सक्ने )